Likhiphe izidumbu izulu abanye balimala | Ilanga News
Home Izindaba Likhiphe izidumbu izulu abanye balimala
Likhiphe izidumbu izulu abanye balimala
Eminye imindeni isale ingondingasithebeni
LIKHIPHE izidumbu ezine lashiya abantu abathathu belimele kanzima izulu ebelihambisana nesiphepho esinamandla ngempelasonto ezingxenyeni ezi-senyakathompumalanga yeKwaZulu-Natal, lashiya imindeni eminingi ingondingasithebeni njengoba kuphephuke uphahla kweminye imizi nezikole.
Kwabadlule emhlabeni kuba-lwa uMxolisi Mthembu (14) waseBiva, eJozini okhothwe yizulu ngoLwesihlanu; nguPaki Dlamini waKwaNondabuya khona eJozini elimlelese ngoMgqibelo; uMnu Nhlakanipho Ndlovu waseMhlekazi, eMkhuze nowesilisa elingatholakanga igama lakhe okuvele ukuthi ungowaseBhanganomo, KwaNo-ngoma.
Lidlulile naseHluhluwe ezindaweni okubalwa kuzona KwaMduku naKwaMnqobokazi, lashiya isililo njengoba abanye abantu besale nezindonga.
ILANGA lithole ukuthi uMxolisi obefunda uGrade 5 eBiva Combi-ned School, ushaywe wumbani ongene endlini ehleli namalungu omndeni. Unina kamufi, uNkz Phu-mzile Gumede, uthi naye ubekhona kule ndlu indodana yakhe eshonele kuyona.
Ucele noma ngubani ongasiza alule isandla ukuze ezokwazi ukufihla indodana yakhe ngesizotha. Uninalume kaPaki – obefunda umatikuletsheni eMavela High School – uMnu Dumisani Dlamini, uthe:
“Umshana ubebuya esitolo ehamba nezinye izingane zalapha ekhaya. Silimele kakhulu ngoba uma ingane isifunda umatikule-tsheni kusho ukuthi sekuseduze ukuba iphungule umthwalo kumzali.
“Kuningi ebesisakubhekile kumshana ngoba nasesikoleni ubekhaliphile futhi kasikungabazi ukuthi ubezophumelela ngamalengiso. Kasinawo namandla okumfihla ngenxa yesimo somnotho esingesihle lapha ekhaya,” kusho uMnu Dlamini.
NgoMgqibelo ngabo-12 emini, izulu ebeliduma okungatheni – kodwa lihambisana nombani – lishaye kabuhlungu abantu abawu-5 edolobheni laseMkhuze lapho kushone khona uMnu Ndlovu nowesilisa waseBhanganomo.
Abasindile baphuthunyiwe esibhedlela kukubi. IMeya yaseJozini, uMnu Delani Mabika, ixwayise umphakathi ngokuba uqaphele uma kuduma izulu.
“Lapha eJozini selishise kakhulu ilanga, okungaba yimbangela yokuthi uma lihloma kube lula ukuba kube nezigameko ezifuze lezi. Uma liduma akufanele ulokhu wehla wenyuka, uma lihloma ungabe usaphuma ekhaya.
“Abantu mabangahambi ema-nzini ngoba izulu liwumngani nawo, mabangami ngaphansi kwe-zihlahla. Noma ngabe bekunedili elinjani ekhaya, akufanele liqhubeke uma kuduma izulu ngoba lokho kungabeka impilo yabantu engcupheni. Sikhalela imindeni ethintekile nabashiywe yizihlobo,” kusho uMnu Mabika.
UMnu Solomon Mkhombo oyimeya yaseMkhanyakude uthe ithimba lezinhlekelele liphansi phezulu lisebenza ubusuku nemini ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka komphakathi.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Lennox Mabaso, uthe ngoMgqibelo
umnyango ukhiphe ithimba lezisebenzi zawo ukuba liyobambisana nomasipala kubhekwe umonakalo. Udlulise amazwi enduduzo emindenini elahlekelwe yizihlobo ngenxa yalesi simo.
“Egameni likaNdunankulu waKwaKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ungqo-ngqoshe wethu uMnu Sipho Hlomuka nezisebenzi zomnyango, sidlulisa ukudabuka nokuzwelana nemindeni elahlekelwe ngabathandiweyo bayo ngenxa yemvelo. Sithanda ukuxwayisa no-mphakathi ngokubaluleka kokuzivikela ngoba lena yimvelo edinga ukuba umuntu ngamunye aziqoqe.
“Ziningi izindlela zokuzivikela okungaba wukufaka abafana bezulu (lightening conductors), wukuvala izingcingo nokuhlala endlini evulekile,” kusho uMnu Mabaso. Kwe-nzeka lesi sigameko nje, ILANGA li-sanda kubika ngoMnu Mphishi Gumede waseMboza, KwaMhlabu-yalingana ofelwe yizinkomo zakhe zishaywa wumphezulu.
UMnu Mkhushulwa Msimang oyisanuse sezulu kwaSABC1, kulolo daba wayala ngokuthi abantu bathole abafana bezulu.
Previous articleIsexwayiso ngeSoweto Derby eThekwini
Next articleUselufake kubameli olokungakhokhelwa wumshwalense